Tirada Soomaali Mareykanka ah ee ku biirtay Xoogaga Daacish oo la Shaaciyay | Wardoon Wardoon.net - Somali News
Tirada Soomaali Mareykanka ah ee ku biirtay Xoogaga Daacish oo la Shaaciyay
Warbaahinta Reer Galbeedka Qaarkood oo soo xiganaya hay’adaha sirdoonka Maraykanka ayaa shaaca ka qaaday tirada dhalinyarada Soomaaliyeed ee ka tagay Dalka Mareykanka kuwaa oo ku biiray Xoogaga Daacish ee ka dagaalama Dalalka Ciraaq iyo Siiriya.
Sanadihii ugu dambeeyay waxaa dalka Mareykanka ka tagay dhalinyaro Soomaaliyeed oo mudo kunoolaa dalkaasi, kuwaa oo ku biiray dagaalka ay wadaan Xoogaga daacish ee hada maamula dhul badan oo katirsan Ciraaq iyo Siiriya.
Warbixino laga soo xigtay hay’adaha sirdoonka Maraykanka ayaa lagu sheegay in tirada dhalinyarada Soomaaliyeed ee ku biirtay Kooxda Daacish in ay gaarayaan 15-qof ,kuwaa oo ka tagay Dalka Mareykanka gaar ahaan Gobolka ay Soomaalidu ku badan tahay ee Minnesota .
C/raxmaan Maxamed , oo kamid ah Dhalinyarada Soomaaliyeed ee ka tagay Dalka Mareykanka kuna biiray Kooxda Dacaish ayaa la hadlay Idaacad kutaala Minnesota, waxa uuna u sheegay Idaacadaasi in uu joogo Dalka Ciraaq uuna ku biiray Daacish uuna u dagaalamo ilaah dariis.
Waxaa sidoo kale jira dad badan oon Soomaali aheyn oo ka tagay Dalka Mareykanka kuwaa oo iyana ku biiray Xoogaga Daacish, waxaana Dagaalada kasocda Dalalka Ciraaq iyo Siiriya lagu dilay Dhalinyaro Soomaali ah iyo kuwa kale oo ka tagay Dalka Mareykanka.
Hay’ada saldhigeedu yahay Dalka Mareykanka ayaa Warbixin ay dhawaan soo saartay ku sheegtay in sanadkii lasoo dhaafay Kooxda Daacish ay ku biireen in ka badan 20-Kun oo Dagaalyahan kuwaa oo qaarkood ka tageen dalalka Reer Galbeedka sida Yurub iyo Mareykanka.